Fanadiovan-drivotra mety amin'ny faritra rehetra
Ny fahatongavan'ny valanaretina iray dia nahatonga antsika rehetra hahatakatra bebe kokoa fa ny fahasalamana no harena lehibe indrindra. Mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny rivotra, ny fihanaky ny bakteria sy ny viriosy, ny fanafihana ny tafio-drivotra, ary ny formaldehyde be loatra ao amin'ny trano vaovao dia mahatonga ny sakaiza bebe kokoa hihaino ny rivotra ...
Nifindra birao vaovao izahay!
Ry mpanjifa malala: faly izahay manambara fa noho ny fisondrotanay miavaka tamin'ny taona 2020, nifindra tamina toerana vaovao ny biraon'ny Shenzhen tamin'ny volana aprily. Ny toerana vaovao dia eo amin'ny 33 / F, Building 11, Tiananyungu Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. Izahay mijery ...
Mila mpanadio rivotra ao amin'ny COVID 19 ianao
Ny fanahiana amin'ny COVID-19, olona maro no manahy ny amin'ny kalitaon'ny rivotra anaty ary raha afaka manampy ny mpanadio rivotra. Ireo manam-pahaizana momba ny Consumer Reports dia nanambara izay tena vitan'ny mpanadio rivotra fonenana amin'ny resaka fanadiovana ny rivotra. Misy karazany telo ny fanadiovan-drivotra izay efa markete ...
Afaka mamono COVID-19 ve ny mpanadio rivotra?
Miaraka amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 dia lasa marimaritra iraisana ny manao sarontava rehefa mivoaka. Noho izany, ao amin'ny tontolo iainana an-trano misy olona mivory ao amin'ny biraon'ny birao, toeram-pivarotana lehibe, hotely, hotely fisakafoanana sns. ...
2021 Fihaonana an-tampon'ny e-varotra sy fizarana Sourcing any Shenzhen
7 Mey-8 Mey 2021 Fihaonana an-tampon'ny e-varotra sy fampirantiana Sourcing Fair dia natao tao amin'ny Hall 8 an'ny Foibe Fampirantiana sy Fampirantiana Iraisam-pirenena an'ny Shenzhen Futian. Feno hipoka ny tany. Miaraka amin'ny lohahevitra hoe "kely kokoa izao tontolo izao, lehibe kokoa ny orinasa", nahasarika olona mihoatra ny 300+ Ali tao ...
Torohevitra mahasoa hiarovana ny tenanao sy ny hafa amin'ny COVID-19
1.Mitafy sarontava izay manarona ny oronao sy ny vavanao hiarovana anao sy ny hafa. 2. Mijanona 6 metatra miala amin'ireo hafa izay tsy miara-mipetraka aminao. 3. Makà vaksinin'ny COVID-19 rehefa azonao io. 4. Sorohy ny valalabemandry sy ny toerana malalaka anaty rivotra. 5. Sasao amin'ny savony sy rano matetika ny tananao. Mampiasà ha ...
afaka mampiasa saron-tava sy mpanadio rivotra isika mandritra ny valanaretina
Vao tsy ela akory izay, ankoatra an'i Sina, ny valanaretina satroboninahitra vaovao manerantany dia nanomboka nanjary henjana indray, ary mbola matotra kokoa noho ny tamin'ny 2020. Noho izany, mbola ilaina ny manao sarontava any ivelany, ary ilaina ny mandrehitra fanadiovan-drivotra amin'ny trano. Na dia tsy afaka manivana amin'ny fomba mahomby aza ireo mpanadio rivotra ...
Fantatsika rehetra fa ny olona eran'izao tontolo izao dia hanao vaksiny amin'ny COVID 19. Midika ve izany fa azo antoka isika amin'ny ho avy? Raha ny marina dia tsy misy afaka mahazo antoka fa rehefa afaka miasa isika ary mivoaka malalaka. Mbola hitantsika fa misy fotoan-tsarotra eo alohantsika ka mila manamarika mba hiarovana ...
Afaka manadio ny Covid-19 ve ny mpanadio rivotra?
Taorian'ny nandaozan'ny setroka ny fahitan'ny olona, ​​maro ny olona no nanana fiheverana manadio ny rivotra, nahatsapa izy ireo fa tsy ilaina ny mividy mpanadio rivotra. Tsy nahatsapa fahasahiranana izy ireo rehefa nifoka tany ivelany isan'andro, fa ny fahatongavan'ireo Covid-19 dia nahatonga ny olona hieritreritra indray, Misy dem ...
Tongasoa eto amin'ny fitsidihana ny fampisehoana mivantana momba ny fanadiovan-drivotra tonga 2021
Tongasoa eto hitsidika ny fampisehoana mivantana momba ny fanadiovan-drivotra 2021 avo lenta
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. dia mampiseho seho mivantana ao amin'ny Made-in-China.com. Miaraha aminay izao! Lohateny: 2021 Fotoana fanombohana fanadio rivotra avo lenta: 2021-03-03 16:00 PM UTC + 08: 00 Tsindrio ity URL manaraka ity raha hiditra mivantana amin'ny efitrano fampisehoana mivantana: https://live.made-in-china.com/ efitrano-dmJnEcxWWQ ...
Tongasoa eto hitsidika ny fampisehoana mivantana an'ny mpanadio rivotra 2021 sy fampisehoana Ozone Generator mivantana
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. dia mampiseho seho mivantana ao amin'ny Made-in-China.com. Miaraha aminay izao! Lohateny: 2021 Hot Selling Air Purifier sy Ozone Generator Fotoana fanombohana: 2021-03-02 20:00 PM UTC + 08: 00 Tsindrio ity URL manaraka ity raha hiditra mivantana amin'ny efitrano fampisehoana mivantana: https: //live.made-in-china. com / room-NxEQ ...
UV Home Air hanadio , Ozone Air Purifier Home Depot , Mazava ho Manafoana ny Home Air hanadio , Best Home Air hanadio Uk , Home Air hanadio, Air madio Home Air hanadio, rehetra Products